Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: August 2010
(က)ရွေးကောက်ပွဲအကြိုစနစ်တကျအဆင်သင့်စီစဉ်ထားသည့်တပ်အတွင်းအပြောင်းအလဲနှင့်အရပ်သားမျက်နှာစွပ်ပေါ်လစီကို ကောဠဟဠသတင်းအဖြစ် ဖြန်.စေကာ..
(၂)စောင့်ကြည့်နေ တဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရများ၏ဆက်တိုက်ဖိအားပေးနေမှုနှင့် စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးတန်ပြန်မှုကိုကာကွယ်လိုက်သည်၊ (၃)တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်းအား စုများ၏ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးလုပ်မည့်ဗျူဟာကိုယာယီရပ်တန်.စေသည်၊
ဆည်းလိုက်ပြီး အာဏာဖိဆန်မှုနှင့်တပ်အ တွင်းမကျေနပ်မှုဘေးအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်လိုက်သည်၊
မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်း စစ်ဘက်ရေးရာဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်တစ်များကလက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုမကြခဏဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါသည်၊ဆင့်ခေါ်သည့်အခါ “နယ်ခြားစောင့်တပ်ကိစ္စပြန်လည်စဉ်းစားပေးဖို.နှင့်၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဖျက်ဆီးခြင်းမပြုလုပ်ဖို.အမြဲပြောလေ့ရှိသည်”.သို.သော်၊ဒီနေ.ဆို ရင် တိုင်းရင်းသားတပ်တွေကိုလက်နက်ချခိုင်းသည့်အထိ ရိုင်ရိုင်စိုင်းစိုင်းပြောဆိုလာသည်ကိုခွေးစစ်ဗိုလ်တို.၏အမိန်.က လူသားဘယ်နာလည်မလဲ၊သဘာဝ နိယာမတရားအရဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်ခွေးတွေဟာလူသားတွေအပေါ်ညွန်းကြားချက်ထုတ်ဖို.မဟုတ်ဘူး၊လူသားတွေကသာခွေးတို.အပေါ်အမိန်.ထုတ်ရပါသှ်၊
ခွေးဟာ အရှင်သခင်ကိုဆင့်ခေါ်ဖို.မဟုတ်၊အရှင်သခင်ကသာခွေးမျိူးကိုဆင့်ခေါ်သင့်ပါသည်၊ထို.ကြောင့်၊ကျနော်တို.ကိုလာရောက်တွေ.ဆုံဂါရဝပြုပါရန်ဗ မာစစ်ခွေးခေါင်းဆောင်များအားဆင့်ခေါ်လိုက်ပါသည်။လာရောက်တွေ.ဆုံဂါရဝပြုနိုင်သည့်နောက်ဆုံးရက်ကစက်တင်ဘာလ(၁)တစ်၇က်နောက်ဆုံးဖြစ် သည်။လာရောတွေ.ဆုံသည့်အခါ လက်နက်မကိုင်ဆောင်ရ၊သက်တော်စောင့် (၁၅)ယောက်ထက်မပိုးရ၊
ကနေ.ကပဲ ဗမာအရေးဆိုင်ရာဥရောပပါလီမာန်အမတ်များအဖွဲ.က ဗမာပြည်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂစုံးစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ကို ဥရောပနိုင်ငံများ ၁၅ နိုင်ငံအနေနဲ.ပါဝင်ထောက်ခံကြပါရန်တိုက်တွန်းထားပါသည်။အခုတလောမှာ မောင်သန်းရွှေတို.အုပ်စု ကအိပ်မက်ဆုိုးမက်နေကြပြီးခွေးမဲများကညတိုင်လိုလိုလာကိုက်စားနေသောကြောင့်အိပ်ရေပျက်နေကြတယ်လို.သိရှိရပါသှ်။
ဤကိစ္စကို ဇိုရာဖန်နှင့်ခရစ္စတီနားတို.နဲ.ဆက်သွယ်ကြပါရန်၊ For more information contact the Caucus administrators: Zoya Phan on +4420 7324 4712, or Kristina Prunerova on +420 777 787
For Immediate Release 19th August 2010
European MPs call on EU to supportaUN Commission of Inquiry on Burma
The European Parliamentary Caucus on Burma (EPCB), representing MPs from 15 European countries, is calling on EU member states to officially support the establishment ofaUN Commission of Inquiry on Burma.
The call from European MPs comes just days after the USA became the fifth country to publicly supportaUN Inquiry. The EU is currently drafting the next UN General Assembly resolution on Burma, which should include the establishment ofaCommission of Inquiry.
The military regime in Burma is responsible for planned, widespread and systematic violations of human rights and freedoms in the county. The abuses include rape and sexual violence, the deportation and forcible transfer of civilians, the recruitment of child soldiers, the persecution of ethnic minorities, the use of torture and other war crimes and crimes against humanity.
The EPCB believes thataUN Commission of Inquiry that would allowathorough investigation and documentation of these crimes, along with the formation of recommendations on future actions and policies, isacrucial step that the international community should support.
In March 2010 the United Nations Special Rapporteur on Human Rights in Burma, Tomás Ojea Quintana, included in his report submitted to the UN Human Rights Council, the recommendation of the appointment ofaCommission of Inquiry, outlining the “gross and systematic” nature of the abuses taking place in Burma.
In June 2010anew report – Crimes against Humanity in Western Burma: The Situation of the Rohingyas – was published by the Irish Centre for Human Rights, also recommending that the United Nations Security Council establishaCommission of Inquiry into the crimes exposed in the report.
“The ongoing atrocities in the country demonstrate the need and urgency for stronger action by the international community. Individual states and EU must take action and officially supportaUN Commission of Inquiry which would beacrucial and effective preliminary step towards putting an end to the constant perpetration of grave abuses and crimes in Burma.” Silver Meikar, executive member of EPCB, says.
For more information contact the Caucus administrators: Zoya Phan on +4420 7324 4712, or Kristina Prunerova on +420 777 787
_______________________________________________ BurmaGlobal mailing list BurmaGlobal@lists.burmacampaign.org.uk
မောင်သန်းရွှေတို.အုပ်စုအနေဖြင့်ကမ္ဘာကိုလိမ်လည်လာခဲ့တာဟာ နှစ်ပေါင်း (၆၀)နီးပါးရှိသွားပါပြီ၊ခင်ဗျားတို.စစ်ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ထားတာကို မီဒိယာဖြင့်ဖုံးကွယ်လာခဲ့တာ၊ဝါဒဖြန်.ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေကိုလမ်းဆုံးလမ်းခွရောက်နေပါပြီ၊အသက် ကြီးအရွယ်အိုးမှထောင်ဝတ်စုံအသေးဆိုးဖြင့်သေးဆုံးရမည်ကိုအိပ်မက်ကမ္ဘာမှဖြစ်မှန်ကမ္ဘာသို.ရောက်လာတော့မည်။ခင်ဗျာ တို.အသုဘကို ခွေးမဲများသယ်ဆောင်ပေးပြီး အဝိစီငရဲကြီးသို.အရောက်ပို.ပေးပါမည်။ဒီနေ.မှစ၍ ခွေးမဲများလာကိုက်စားတာ တွေနေ.စဉ်နေ.တိုင်အိပ်မက်မက်ပါစေလို.တိုင်းရင်းသားအသံမှဆုတောင်းလိုက်ပါသည်။ခင်ဗျားတို.တတွေဟာ စစ်သူကြီးကောင်း များမဟုတ်၊နိုင်ငံရေးသမားကောင်းများမဟုတ်သောကြောင့်သူယုတ်မာများသာဖြစ်ကြသည်။
has decided to throw its crucial support behind moves to establishaspecial UN commission to investigate alleged war crimes perpetrated by the military rulers of Burma.
In what representsamarked rollback of one of President Obama's most controversial foreign policy initiatives, US officials said Washington would now back the war crimes investigation, as urged earlier this year by the UN special rapporteur for human rights in Burma. Washington is also said to be considering tightening sanctions against the junta.
A total of about 40 parties have registered to participate in November's elections, though many of them are groups led by former senior military officers who have taken off their uniforms for the process. The National League for Democracy, the party of Ms Suu Kyi,aNobel laureate, voted not to participate, thoughabreakaway group has registered.
Activists yesterday welcomed the US decision. Aung Din, executive director of the Washington-based Campaign for Burma, said: "This is the right and timely action in response to the power thirsty and brutal generals, who are expecting to delete their dirty crimes by puttingasham constitution into effect throughasham election.
Mark Farmaner, of the Burma Campaign UK, also supported the move but said it was essential the EU madeasimilar declaration. "The EU must end its silence on crimes against humanity in Burma, and publicly supportaUN inquiry," he said.
They fearahumanitarian crisis may develop along the border with Thailand, where the Burmese military has been fighting ethnic Karens, pushing thousands of refugees across the border. Karen National Union fighters have been battling for halfacentury for greater autonomy from Burma's central government.
In March, the UN special rapporteur for Burma, Tomás Ojea Quintana, issuedareport that was highly critical of the country's human rights situation. Urging an investigation, he said there was evidence of mass killing, torture, forced displacement and rape.
* The alleged use of forced labour to build pipelines and other infrastructure, torture and beatings, and the use of rape by Burma's armed forces. Human Rights Watch says that such violations are widespread in Burma.
*The violent crackdown on the September 2007 "Saffron Uprising", headed by Buddhist monks, which left scores of people dead.
ဗမာဘဏ်နှင့်ပေါင်းမိတာရင်နာစရာကောင်းလှသည့် ဗာကလေး ဗြိတိသျှဘဏ်၊ဒဏ်ငွေ $၂၉၈ မီလီယံ အရိုက်ခံရမည်၊
Under the proposed agreement, Barclays will forfeit $149 million pursuant to an agreement with the U.S. Justice Department and another $149 million inaseparate agreement with the New York County District Attorney's office. Above, Barclays branch in London.
Barclays Settles Sanctions-Bust Case
Inareference to Barclays, based in London, the judge said the proposed agreement as filed is "an accommodation toaforeign bank, and that concerns me."
Judge Sullivan, who has chastised the U.S. government in other company-related settlements, demanded that lawyers return to his courtroom Wednesday prepared to address his concerns. He could reject the deal after hearing the arguments.
A Justice Department lawyer said the $298 million agreement is "well in excess" of what Barclays earned by processing payments from countries under U.S. economic sanctions over an 11-year period that ended in 2006. The money would be divided evenly between the U.S. government and Manhattan district attorney's office. Barclays declined to comment after the hearing.
The judge's comments are the latest example of what some legal experts callapattern of increasing displeasure from the bench about how the U.S. government is resolving investigations of major financial institutions.
The trend began with last year's rejection by U.S. District Judge Jed Rakoff in New York ofaproposed $33 million settlement by Bank of America Corp. of Securities and Exchange Commission civil charges that the Charlotte, N.C., bank misled shareholders about bonuses at Merrill Lynch & Co.
The judge eventually approvedarevised $150 million settlement, but his resistance and prodding of the SEC likely encouraged other federal judges to takeatougher stance, said Peter Henning,alaw professor at Wayne State University in Detroit.
On Monday, U.S. District Judge Ellen Segal Huvelle in Washington refused to approve the SEC's $75 million settlement with Citigroup Inc. over the bank's disclosure of subprime-mortgage problems, saying she is "baffled" by the proposed deal. She scheduledafollow-up hearing for mid-September.
Legal experts say the comments suggest judges believe their approval of the proposed settlements is viewed asafait accompli by lawyers for the government and companies.
It is much more common for judges to push back in criminal cases where settlements must be in the public interest than in civil cases reached between private parties. But the government's use of so-called deferred prosecution agreements has fueled criticism that companies are getting off easy.
"It'sadelicate balancing act," Mr. Henning said about weighing the benefits ofaquick, cost-effective settlement against terms that are sufficiently tough and fair. In the Barclays case, criminal charges against the U.K. bank would be dismissed after two years if Barclays meets certain conditions. So far, no bank employees have been charged.
James Cox,alaw professor at Duke University in Durham, N.C., said some of the same questions raised in the Bank of America case by Judge Rakoff could be asked about the proposed Barclays settlement. "If there wasabasis foraviolation here, just who were the culpable officers?" Mr. Cox said. "Why aren't they contributing any money? I think it'safeeling that we've played this game long enough."
Joseph Warin, chairman of law firm Gibson, Dunn & Crutcher LLP's litigation department in Washington, said it would be unusual for Judge Sullivan to reject the Barclays settlement. "What is absolutely clear is that the parties have worked very hard on this," said Mr. Warin, who isn't involved in the Barclays case.
In 2006, Judge Sullivan scrutinized antitrust agreements in Verizon Communications Inc.'s acquisition of MCI Inc. as well as the former SBC Communications Inc.'s takeover of AT&T Corp. He approved the pacts after concluding that they were in the public interest.
Deferred-prosecution agreements between the U.S. government and Credit Suisse Group, Lloyds Banking Group PLC and the former ABN Amro Holding NV over processing payments from sanctioned countries were approved by federal courts. Judges signed off on two of the settlements without hearings.
A person close to Barclays said executives were comfortable with the $298 million penalty partly because the amount is less than the $350 million that Lloyds agreed to pay last year to settle similar accusations. Barclays felt the smaller fine sent an important signal about the relative severity of the allegations against Barclays, according to this person.
2010-08-11 RFA သတင်းဌာန
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ မဟာမုနိ ဗုဒ္ဓဝိဟာရကျောင်းက သမိုင်း သုတေသီ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော် ဦးပညာစာရကို ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့က လူဝတ်လဲ ဖမ်းဆီးထားတဲ့အတွက် ဒေသခံတွေက ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီကို သဘောထားနဲ့ အကြံပြုချက်တွေ ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့ အဲဒီပါတီက သတင်း ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဆရာတော်ကို တရားစီရင်ရာမှာ ထိုက်သင့်တဲ့ ဥပဒေ အခွင့်အရေးတွေ ပေးအပ်ဖို့။ ဆရာတော် ပြုစုခဲ့တဲ့ ရခိုင်သမိုင်းဝင် ပေစာ၊ ကျမ်းစာ၊ ဒင်္ဂါးပြား အစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ရခိုင်ဒေသမှာပဲ ထားရှိဖို့ စတဲ့ ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ သဘောထား ဆန္ဒတွေကိုလည်း ပါတီရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ထိန်းသိမ်းခံဆရာတော်ရဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စစ်တွေမြို့က ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ အေးမောင်ကို RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်အောင်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
ရခိုင်လူငယ် ၁၁ ဦးကို နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်လိုက်ပြီ
အင်းစိန်ထောင်တွင် ထိန်းသိမ်းခံထားရသော ရခိုင်လူငယ် ၁၁ဦးကို သြဂတ်စ်လ ၁၁ ရက်နေ့က အင်းစိန်ထောင်တွင် တည်ရှိသော အနောက်ပိုင်းတိုင်း တရားရုံးက နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်များ အသီးသီး ချမှတ်လိုက်သည်။
ရခိုင်လူငယ် ၁၁ ဦးမှာ စွဲချက် အမျိုးမျိုးဖြင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူများ ဖြစ်ပြီး အနောက်ပိုင်း ခရိုင် တရားရုံးမှ ဒုတိယ (၁) ခရိုင် တရားသူကြီး ဥင်္ီးမြင့်စန်းက ထောင်ဒဏ် ၃နှစ်မှ ၉နှစ်အထိ အသီးသီး ချမှတ် လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကိုနိုင်စိုး(ခေါ်)မဲလုံး၏ ဆွေးမျိုးတဦးက“ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်တဲ့အထဲမှာ ကိုရဲထက်စိုးက အများဆုံးပေါ့ ၉နှစ်ဆိုတော့။ ကိုမဲလုံးကိုတော့ အမှုနှစ်မှုနဲ့ ၈နှစ် ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ မိသားစုဝင်တွေက တော်တော့ကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေကြပါတယ်။ အယူခံဝင်မယ်လို့လည်း စီစဉ်နေကြပါတယ်။” ဟု ပြောသည်။
၎င်းတို့ထဲမှ ကိုနိုင်စိုး(ခေါ်)မဲလုံးကို အသင်းအဖွဲ့ဥပဒေပုဒ်မ ၇ ဖြင့် ၃နှစ်၊ ဖေါက်ခွဲရေး ပစ္စည်း လက်ဝယ်ထားရှိ မှုဖြင့် ၅နှစ် စုစုပေါင်း ၈နှစ်နှင့် ကိုရဲထက်စိုးအား အသင်းအဖွဲ့ဥပဒေပုဒ်မ ၇ ဖြင့် ၃နှစ်၊ ဖေါက်ခွဲရေးပစ္စည်း လက်ဝယ်ထားရှိမှုဖြင့် ၅ နှစ်၊ ဂြိုလ်တု ဆက်သွယ်ရေး ဖုန်းတလုံး ဖမ်းဆီး ရမိခြင်းဖြင့် ၁နှစ် စုစုပေါင်း ၉နှစ် ချမှတ်လိုက်သည်။
ကိုထွန်းလင်းကျော်၊ ကိုခိုင်ကျော်မိုး အပါအဝင် ၆ဦးကို အသင်းအဖွဲ့ဥပဒေပုဒ်မဖြင့် ၃နှစ်၊ နယ်စပ်တရားမဝင် ဖြတ်ကျော်မှုဖြင့် ၃နှစ် စုစုပေါင်း ၆နှစ် ချမှတ်လိုက်သည်။ ကျန်လူငယ်များကို သုံးနှစ်စီ အသီးသီး ချမှတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ကိုခိုင်ကျော်မိုး၏ သူငယ်ချင်းတဦးက“ အခုလို ချမှတ်လိုက်တာက လုံးဝမတရားဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ သူတို့ကို ဖမ်းတုန်းကလည်း သက်သေအထောက်အထားတွေ တခုမှ မပြပဲနဲ့ ဖမ်းခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ အခုလည်း သူတို့ (အာဏာပိုင်များ) စိတ်ကြိုက် ပုဒ်မတွေတတ်ပြီးတော့ ထောင်ဒဏ်တွေ ချမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ လုံးဝ မတရားလို့ မြင်ပါတယ်။”
အဆိုပါ ရခိုင်လူငယ် ၁၁ဦးကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်္ဘာလ ၄ရက်နေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံသား ကိုညီညီအောင် အားမင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်တွင် ဖမ်းဆီးစဉ် တရက်တည်းတွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
သူတို့အား ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ကိုညီညီအောင်နှင့် ဆက်စပ်မှု ရှိသည်ဟု စွပ်စွဲပြီး ရန်ကုန်တွင် ဖေါက်ခွဲရေး အစီအစဉ်များလုပ်ဆောင်ရန် ပြင်ဆင်နေသူများ ဖြစ်သည်ဟု သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် နအဖစစ်အစိုးရမှ မဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း အမှုတင်သည့်အခါ ကိုညီညီအောင်နှင့် ဆက်စပ်ပြီး အမှုတင်ခြင်းမရှိဟု သိရသည်။
အဆိုပါ ရခိုင်လူငယ် ၁၁ဦးမှာ အသက် ၂၀ နှစ် အရွယ်ဝန်းကျင်ရှိသူ လူငယ်များ ဖြစ်ပြီး သူတို့မှာ ကိုခိုင်ကျော်မိုး၊ ကိုထွန်းလင်းကျော်၊ ကိုနိုင်စိုး(ခေါ်) မဲလုံး၊ ကိုကျော်စံသိန်း၊ ကိုဇော်ထွန်းနိုင်၊ ကိုအောင်မိုးဇော်၊ ကိုကျော်ဝင်း၊ ကိုမောင်နိုင်စိုး၊ ကိုအောင်နိုင်၊ ကိုရဲထက်စိုးနှင့် နောက်တဦး တို့ဖြစ်ကြပြီး သူတို့မှာ စစ်တွေ၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်များမှဖြစ်ကြသည်။
ကြာသပတေးနေ့၊ သြဂုတ်လ 05 ရက် 2010 ခုနှစ် စောသိန်းမြင့် သတင်း - ကေအိုင်စီ
ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်း ယမန်နေ့က နအဖ စစ်အစိုးရတပ်များနှင့် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အ မျိုးသားတပ်မတော်(ဒီကေဘီအေ)တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ကေအိုင်စီက စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ယမန်နေ့ည (၇)နာရီခန့်တွင် ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ(၉၉၉)မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် လက်နက်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ကားဖြင့် ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၆)သို့သွားရန် တပ်မဟာ(၆)နှင့် (၇)စပ်ကြားရှိ ကော့ကရိတ်-မြ၀တီကားလမ်း၏ အောက်တိုတဲဂိတ်မှ နအဖ စစ်တပ်များက သွားခွင့်မပြုခဲ့သည့်အတွက် အချင်းများရာမှ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြော သည်။
၎င်းက “ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၆)ဘက်ကိုသွားမယ့် (၉၉၉)တပ်ဖွဲ့ကို အောက်ဘိုတဲအရောက်မှာ ဂိတ်မှာရှိတဲ့ နအဖတပ်က သွားခွင့်မပေးဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီကေဘီအေဘက်က သေနတ်ဖောက်တော့ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ သိရ တယ်။ နအဖဘက်က ၅ယောက်လောက်သေတယ်လို့ ကျနော်တို့ကြားတာပဲ။ ဒီကေဘီအေဘက်က ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အထိ လောက်ပဲ ဖြစ်တယ်။”ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါတိုက်ပွဲသည် ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ(၅)နှင့် တပ်မဟာ(၉၉၉)တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြား ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ကြောင်း နယ်မြေခံများ က ပြောဆိုနေကြသည်သော်လည်း ၎င်းပစ်ခတ်မှုသည် ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်း ဖြစ်ပွားခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ဒီကေ ဘီအေ တပ်မဟာ(၅)မှ ထိပ်တန်းအရာရှိတဦးက အတည်ပြုပြောကြားသည်။
သူက “တိုက်ပွဲဖြစ်တာကတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့လူတွေကို လှမ်းမေးကြည့်တော့ သူတို့နဲ့ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူး။ (၉၉၉)တပ်ဖွဲ့နဲ့ နအဖတို့ကြား အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်ကြတာပါ။”ဟု ကေအိုင်စီကို ပြောသည်။
အလားတူ ယနေ့မနက်ပိုင်းတွင်လည်း ကော့ကရိတ်မြို့အနီး၌ နအဖနှင့် ဒီကေဘီအေတို့ကြား ပစ်ခတ်မှုတခု ထပ်မံ ဖြစ်ပွားခဲ့ ရာ ထိခိုက်သေဆုံးမှုများ ရှိခဲ့သည်ဟု အပစ်ရပ်အဖွဲ့များ၏ သတင်းရပ်ကွက်များမှ ကြားသိရ သည်။
အမည်မဖော်လိုသူ ဒီကေဘီအေ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက “ဒီနေ့ဟာ တိုင်းမှူးလာမယ်ဆိုလို့ ကားလမ်းတွေက ဂိတ်တွေ ကလည်း လမ်းကင်းတွေ ချထားတယ်။ ဒီနေ့မနက် ၁၀နာရီလောက်မှာ ကော့ကရိတ်ကနေ တက်လာတဲ့ စစ်ကား တန်းကို ဒီကေဘီအေ (၉၀၂)က ပစ်ခတ်တယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီနေရာမှာ လမ်းကင်းရှင်းတဲ့ စစ်သားနှစ်ယောက် ဗုံးထိသွားတယ်လို့ ကြားတယ်။”ဟု ဆိုသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ထိုပစ်ခတ်မှုအတွင်း နအဖဘက်မှ ဒဏ်ရာရ စစ်သည်များကို ကော့ကရိတ်ဆေးရုံကြီးတွင် ကုသမှုခံရနေရ ကြောင်း မြို့ခံပြည်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယမန်နေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွန်းလွဲ ၃နာရီခန့်တွင် အရေးပေါ်ကား ၃စီး ဖားအံဘက်ကို မောင်းနှင်သွားကြောင်းနှင့် အင်္ဂါနေ့ ကလည်း မိုးကာတာလပတ်များ အလုံပိတ်ထားသည့် စစ်ကား ၅စီးလည်း ဖားအံဘက်ကို အပြင်း မောင်းနှင် သွားကြောင်း ကိုယ်တိုင်မြင် တွေ့ခဲ့သည့် ဖားအံမြို့နယ်၊ မြိုင်ကလေးကျေးရွာသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယခုလို နအဖ စစ်တပ်ကားများ ပုံမှန်ထက် ထူးခြားစွာ ကရင်ပြည်နယ်ထဲသို့ ၀င်ရောက်လာခြင်းမှာ နယ်စပ်ဒေသ ဘက်တွင် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်လာနိုင်မည့် အလားအလာများ ရှိသည်ဟုလည်း ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပြည်သူ များက ဝေဖန် ပြောဆို နေကြသည်။
ဗမာစစ်အစိုးရက ကရင်လူမျိုးတွေကို အုပ်ချုပ်ချင်နေတာမဟုတ်၊လုံးဝလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ချင်နေတာဖြစ်သည်၊
The Burmese don't want to dominate the Karen, they want to completely wipe out the Karen (Voice from the following video)
Prayer of Peace - Relief & Resistance in Burma's War Zones [English subtitles] from Matt Blauer on Vimeo.
ဘူးသီးတောင်မြို့မှ လင်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို မူဆလင် ၂ ဦးက ဗလက္ကာရ ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ဗလက္ကာရ ပြုကျင်ခံရသူမှာ ဒေါ် ---- ( ၄၂) နှစ်ဖြစ်ပြီး ဘူးသီးတောင် ၃ ရပ်ကွက်မှ ဖြစ်ကြောင်း သူတို့နှင့် နီးစပ်သူ အမျိုးသမီး တဦးက ပြောသည်။
“ ဖြစ်တာက ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ ဖြစ်တာပါ။ သူနဲ့ သူယောင်္ကျားက သီဟို သရက်ခြံမှာ အစောင့်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သီဟိုခြံက အပြန်မှာ မူဆလင် ၂ ယောက်က နောက်ကလိုက်လာပြီး ယောင်္ကျား ဖြစ်သူကို သတ်ပုတ်ပြီး မိန်းမကို ဗလက္ကာရ ပြုကျင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု သူမက ပြောသည်။
အဆိုပါ အမျိုးသမီးတို့ အစောင့်လုပ်နေသော သီဟို သရက်ခြံမှာ ဘူးသီးတောင် ထောင်အနီးတွင် တည်ရှိပြီး လင်မယားနှစ်ယောက် အလုပ်ပီး၍ ပြန်လာစဉ် ထိုသို့ တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အမျိုးသမီးနှင့် ယောင်္ကျား ဖြစ်သူကို ဆေးရုံသို့ ပို့လိုက်ရပြီး ဆေးစစ်ဆေးမူများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ယခုအခါ ဗလက္ကာရ ပြုကျင့်သူ နှစ်ဦးကို ဘူးသီးတောင်ရဲမှ အချိန်မှီ ဖမ်းဆီးထားနိုင်ခဲ့ပြီး တရားစွဲဆိုရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း သိရသည်။
( မှတ်ချက်။ ။ သက်ဆိုင်သူများကို ထိခိုက်နိုင်သဖြင့် အမျိုးသမီးနှင့် ယောင်္ကျား ဖြစ်သူ၏ အမည်ကို မဖေါ်ပြလိုက်တော့ပါ။)
အပစ်ရပ် SSA နာယက ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲန်
“ထောင်ဝင်စာသွားမတွေ့ရသေးတော့ ဘာ့ကြောင့်ထောင်ပြောင်းတယ်ဆိုတာမသိရဘူး။ မျက်စိကုပေးဖို့ကျန်းမာရေးစစ် ပေးဖို့ လို့ထင်တယ်။ လာမယ့်စနေနေ့ မှာတွေ့ရမယ်လို့ကြားထားတယ်။ မန္တလေးထောင် ပြောင်း လို့ဆေးကုသရရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲ” ဟု သမီးဖြစ်သူ နန်းခမ်းပေါဝ်း ကပြောပါသည်။
သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲန့်အား မန္တလေးထောင်၌ မထားဘဲ ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေထောင်သို့ ဆက်လက်ပြောင်းရွေ့ မည်ဆို သည့် သတင်းကလည်း ထောင်အာဏာပိုင် သတင်းရကွက်မှ ကြားသိရ၏။
“မန္တလေးထောင်ပို့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားမိလို့ တမိသားစုလုံးဝမ်းသာမိတယ်။ စစ်ကိုင်းအထက်ပိုင်းကခမ္တီးထောင် လို သိပ်မခြားနား တဲ့ နယ်စွန်နယ်ဖြား ရခိုင်ပြည် စစ်တွေဘက်ကို ထပ်မပို့ဖို့ဘဲ ဆုတောင်းတယ်။ မန္တလေးမှာဘဲ ဆေးကုသခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်တယ်” ဟု သမီးဖြစ်သူနန်းခမ်းပေါဝ်းက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ဆက်လက်ပြောပြပါသည်။
နအဖ စစ်အုပ်စုဖိအားပေးသည့်အတိုင်း အပစ်ရပ် (မြောက်ပိုင်း) သျှမ်းပြည်တပ်မတော် ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့အဖြစ် အသွင်ပြောင်းပါက ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲန့်ကို လွတ်ပေးမည်ဆိုသည့်သတင်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှောင်းပိုင်း၌ သတင်းပျံ့နှံ့ခဲ့ သေး၏။
အသက် ၇၄ နှစ်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲန့်သည် မျက်စိတိမ်ဖုံးရောဂါအပြင် မကြာမီကလည်း ချော်လဲသဖြင့် လက်တဘက်လဲ ကျိုးနေသည်ဟုဆို၏။ သွေးတိုး၊ နှလုံး၊ ဆီးချို အပြင် လူကြီးရောဂါလည်း အမျိုးမျိုးခံစားနေရကြောင်း သမီးဖြစ်သူက ပြောပါသည်။
ကရင်လူငယ်များ နိုင်ငံရေး ပိုမိုနိုးကြားစေရန် KYOနှင့် KSNG စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မည်
သြဂုတ်လ ၂ရက်။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ကရင်ဒုက္ခသည် စခန်းအသီးသီး၌ ကရင်လူငယ်များ နိုင်ငံရေး ပိုမိုနိုးကြားလာစေရန် ရည် ရွယ်ပြီး ကရင်လူငယ်အဖွဲ့များက လာမည့် သြဂုတ်လ ၉ရက်နေ့မှစ၍ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်တရပ် ပြုလုပ်သွားမည် ဟု သိရသည်။
အဆိုပါစည်းရုံးရေးခရီးစဉ်ကို ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး(KYO)နှင့် ကရင်ကျောင်းသားများ ကွန်ယက်အဖွဲ့ (KSN G)တို့ ဦးစီးလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သည့် မေလက ပြုလုပ်ခဲ့သော (၇)ကြိမ်မြောက် ကရင်အမျိုးသား စည်း လုံးညီညွှတ်ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ခရီးစဉ်ဖြစ်မြောက် ရေး တာဝန်ခံ KYOအတွင်းရေးမှူး စောရော်ကီခူပီတခါက ပြောသည်။
၎င်းက “(၇)ကြိမ်မြောက် Seminar ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ကျနော်တို့ အကောင်အထည်ဖို့ ဖြစ်တယ်။ ရည်ရွယ် ချက်ကတော့ လူငယ်တွေ နိုင်ငံရေး ပိုမိုနိုးကြားစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစည်းရုံးရေးခရီးစဉ်ကိုတော့ လာမယ့် သြဂုတ် လ ၉ရက်ကနေ ၁၅ရက်နေ့အထိ မယ်ရာမိုနဲ့ မယ်လအူးစခန်းမှာ အရင်ဆုံးလုပ်မယ်။”ဟု ပြောသည်။
၎င်းစည်းရုံးရေးခရီးစဉ်ကို နယ်စပ်ရှိ ကရင်ဒုက္ခသည် (၇)ခုအတွင်း၌ ၂၀၁၀ခုနှစ် သြဂုတ်လမှစ၍ လာမည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လအထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း၌လည်း အလျင်းသင့်သလို လုပ်ဆောင်သွား မည့်အပြင် ကရင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအဖွဲ့(KUSG)သည်လည်း ပါဝင်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါမည့် KSNG ဒုဥက္ကဌ နော်ဆာမူးက “ကျမတို့ကတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ စခန်းထဲ က ကျောင်းသားလူငယ်တွေကို ဆွေးနွေးချပြသွားဖို့ရှိမယ် ထင်တယ်။ ဥပမာ စာသင်ကျောင်းမှာ သွားဆွေးနွေး မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့က ကြီးကြပ်ပြီးတော့ သွားရမယ် စသဖြင့်ပေါ့။”ဟု ဆိုသည်။
ကရင်လူငယ်များအတွက် စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်သည် အမှန်တကယ် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်သွားမည်ဆိုပါ က ကျောင်းသားလူငယ်များအတွက်များစွာ အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း မယ်လစခန်းမှ ကရင်လူငယ် စောမျိုးအောင်က ပြောသည်။ သူက “ဒီအစီအစဉ်ကို တကယ်လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် လူငယ်တွေ အမျိုးသားရေးအ တွက် အလုပ်ဝင်လုပ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေ အများကြီးရှိမယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်။ နောက်ပြီး ဒုက္ခသည် စခန်းအပြင် ထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ ကရင်လူငယ်တွေ၊ ပြည်တွင်းက လူငယ်တွေအတွက်လည်း လုပ်ပေးဖုိ့ လိုအပ် တယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်။”ဟု ပြောသည်။
KYO သည် ကရင့်တော်လှန်ရေးကို ဆက်လက်တာဝန်ယူနိုင်ရန်အတွက် ကရင်လူငယ်များ ပြုစုပျိုးထောင်ရေး အပါအ၀င် ရည်ရွယ်ချက် ၆ဖြင့် ၁၉၈၉ခုနှစ်က ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး KSNG ကို ကရင်ကျောင်းသားလူငယ်များ ခေါင်း ဆောင်မှု အတတ်ပညာကိုသင်ယူရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက် ၅ချက်ဖြင့် ၁၉၉၆ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။